हस्पिटलमा यस्तो अवस्थामा भेटीइन् शिल्पा ! के भयो होला त ? – सुदूरखबर डटकम
हस्पिटलमा यस्तो अवस्थामा भेटीइन् शिल्पा ! के भयो होला त ?
काठमाडौं : निर्माता छवि ओझालाइ सम्बन्धविच्छेद गर्ने पक्का गरेकी नायिका शिल्पा पोखरेलको यसै बेला जिवनमा मेल खाने नयाँ भिडियो सार्वजनिक भएको छ। भिडियोमा मोडेल नविन बूढाथोकीले नायिका पोखरेलको आँशु पुछ्दै गरेको मार्मिक दृश्यले सबैलाई रुवाउने किसिमबाट प्रस्तुत गरिएको छ।